Boltless ogbe Factory - China Boltless ogbe Manufacturers & Suppliers
Nnukwu ọrụ 5 oyi akwa boltless ese galvanized ígwè ogbe maka esi, ụlọ nkwakọba ihe, na-adọba ụgbọala, ụlọ ọrụ
Nnukwu ihe dị iche n'etiti SP usoro shelving ogbe na SG usoro shelving ogbe bụ na SP usoro eji ese galvanized ígwè (ọzọ ntụ ntụ mkpuchi usoro). Mgbe electrostatic spraying na acid phosphating ọgwụgwọ, Ọdịdị bụ ike na ọdịdị bụ nchara na-àmà.
175kg 350kg 265kg oké ọrụ galvanized ígwè boltless stacking ogbe
Iji ogwe a nke abc ị nwere ike ịchekwa nnukwu, ihe buru ibu buru ibu n'enweghị nsogbu, ma debe ebe obibi gị ma ọ bụ ebe ọrụ gị edozi, ngwa ngwa ma dịkwa mfe. Shelfdị ihe a nwere ike ịchekwa ngwaọrụ, akụrụngwa, akụrụngwa na ihe ndị ọzọ dị mkpa ruru ọtụtụ puku pound, ọ ga-ewe naanị nkeji ole na ole iji gbakọta.
Ikuku 5-Shelf Steel Shelving 48 ″ W x 24 ″ D x 72 ″ H
Mepụta ụfọdụ ohere nchekwa n'ụlọ gị site na ị gbakwunye Muscle Rack 5-Shelf Steel Shelving. Ihe a nwere ngwa nchara eji arụ ọrụ ụlọ ọrụ eji arụ ọrụ ọlaọcha na-arụ ọrụ iji nye ume na ịke. Mpempe akwụkwọ nchekwa nchekwa ihe a bụ 48 "W x 24" D x 72 "H, na ụdị Z-beam na-enye ike na ịdị ike, na-enye ya ohere iburu ibu dị arọ. A na-akwado shelf ise nwere ogwe osisi na-arụ ọrụ site na mbadamba okpukpu abụọ na nkwado ma nwee ike ịhazi ya na 1.5 "ntinye iji nweta ihe nke nha dị iche iche. Ogwe nchekwa nchekwa 5 nwere atụmatụ mkpọchi rivet ma na-agụnye njikọta njikọ iji mee nzukọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe na-enweghị mkpa mkpụrụ ma ọ bụ bolts.
5 Efere kpaliri Steel Shelving Boltless Garage Nchekwa racking Shelves Unit Maka mapụtara Parts Nchekwa
SG175C Ngwaahịa kachasị ere na Europe
Anyị Simple na Uru 5 shelf Nchekwa ogbe nke dị ukwuu N'ihi na gị Kitchen, Garage, Shop, wụsịrị, griin haus, na kaboodu. Simpledị Mfe Dị Mfe Ya Na Agba Agaghị Agba Ga-eme Ka Oghere Ọ bụla Na-arụ Ọrụ ma Hazie. Na 5 shelf na-enye onyinye ohere maka ohere maka ụlọ gị. E wezụga nke ahụ, Ọ siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya ma nwee ike ịgbakọta n'ụzọ dị mfe n'enweghị ngwaọrụ ọ bụla. Egbula Tozụta Ya!
5-shelf nchara waya Garage Nchekwa shelf shelf 36 ″ W x 18 ″ D x 72 ″ H
Ihe akwara siri ike nke na-arụ ọrụ 5-shelf nchara na-arụ ọrụ ya na atụmatụ Z-Beam mara mma ma na-acha anụnụ anụnụ bụ ihe nchekwa nchekwa zuru oke maka ịhazi ihe ndị dị na okpuru ulo gị, ebe a na-arụzi ụgbọala, azụmahịa, ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ nnukwu ọrụ kwụ ọtọ nchekwa. Okpokoro ya siri ike nwere uwe mkpuchi uzuzu nke na-eguzogide abrasion, chipping, na corrosion maka ike na-adịgide adịgide. Unitlọ ọrụ a nwere ike ịchekwa ọtụtụ ihe, nnukwu ma ọ bụ obere, jiri mma nke shelf na-agbanwe kwa sentimita 1.5 ọ bụla.
Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Obere Nchekwa Obere Ogbe shelf Shelf maka ulo Ime ụlọ ime ụlọ Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa